JINDAGANI.COM ⋆ जिन्दगानी डटकम . जिन्दगानीका कहानीहरू . Stories from life. Nepali lifestyle Magazine.
२०७८ माघ ०९, आइतबार
कार्तिक २६, २०७४	0
पहिले अयोग्य लडाकु, अहिले विश्व च्याम्पियन
By शकुन्तला जोशी
मीरा आफू माओवादी आन्दोलनमा जोडिनुलाई जीवनको अवसरका रूपमा लिन्छिन् । युद्धका क्रममा नै आफूले व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसर पाएको बताउँदै भन्छिन्, ‘म गरिब परिवारकी केटी, पार्टीमा नजोडिएको भए देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्न कहाँ पाउनु ? त्यहाँका दुःख देखेर नै मैले अवसरको खोजी गर्ने सपना बुनें ।’
कार्तिक २४, २०७४	0
जब नम्रता नाच्छिन्…
By कला अनुरागी
कत्थक नृत्यमा पहिले त धार्मिक कथाहरू प्रस्तुत गरिन्थ्यो । अहिले भने सामाजिक कथालाई पनि प्रस्तुत गरिन्छ । त्यसैले यसको आयाम विस्तार भइरहेको छ । तबला, मृदंगतगायतको बाद्य र घुंघरुको तालमा विभिन्न कथा नृत्यमार्फत अभिव्यक्त गर्दा नम्रतालाई खुब आनन्द आउँछ ।
कार्तिक २३, २०७४	0
‘बुढियासँग घुम्नेलाई देहाततिर राम्रो मान्दैन’
चर्चित कवि धूमिलको कविता ‘मोचिराम’मा उल्लेख भएझैं महँगा जुत्ता लिएर आउने ग्राहक पनि उनका लागि जुत्ता समान हुन् । ग्राहकको जुत्ता मर्मत गरिदिएवापत पाइने पैसासँग मात्र उनको मतलब छ ।
कार्तिक २०, २०७४	0
पोर्न नाटकको आरोप !
कतिले त ‘पोर्न’ नाटक नै गर्न लागे भन्नेजस्तो प्रतिक्रिया पनि आएको थियो । त्यसैले हामीलाई अलि डर लागिरहेको थियो । निर्देशकहरू पनि त्यसरी नै डराएका थिए । किनकि पहिलोपटक यसरी ‘रिस्क’ लिएर नेपालमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि । त्यसैले त्यो नाटक नै नगर्ने कि भनेर भावुक पनि भएका थियौं ।
नाम्लोले किचिएको रहर
‘पढ्नुपर्छ है । अनि मात्रै जान्नेबुझ्ने भइन्छ’ भनिरहने घनश्याम सरलाई सम्झिए । तर, समय घर्किसकेको थियो । फर्केर जान पनि लाज लाग्यो । उनको जीवन भने लाज नमानी हिँडिरह्यो ।
साउन २१, २०७४	0
मकै सुन्दरीको संघर्ष-कथा
मकै पोल्न तगारीमा सल्किँदै गरेको अगुल्टोको आगो ठोस्दै उनी भन्छिन्, ‘काली भए नि बैंसले यही आगोजस्तो राता थिए गाला । मन पराउने र जिस्क्याउने थुप्रै थिए । एकदिन साथीको लहलहैमा मकवानपुर पालुङको ट्रक ड्राइभरसँग भागेँ । जीवनको अर्को दुर्भाग्य त्यही दिनदेखि शुरु भयो ।’